အိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးဆပ်ပြာကိုဓာတ်ခွဲခန်းတွင် သုံး၍ မရပါ
အလိုအလျောက် glassware လျှော်စက်များအတွက်သန့်ရှင်းရေးဆပ်ပြာကိုသင်မည်သို့ရွေးချယ်သနည်း။ အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများစွာတပ်ဆင်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်းများစွာသည်အိမ်သုံးသန့်ရှင်းရေးဆပ်ပြာကိုနူးညံ့သောဖန်ခွက်ခွက်တူရိယာများသန့်ရှင်းရန်သုံးသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သင်၏အက်စစ်ကိုပြင်ဆင်ရန် (သို့) မအတည်ပြုရသေးသောအက်စစ်ကိုသုံးခြင်းသည်ပိုဖြစ်လေ့ရှိသည်။
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် module အသစ်တစ်ခုရှိသည်၊ များစွာသော test tube သို့မဟုတ် pipettes များကိုကြောက်ရန်မလိုအပ်ပါ
20-08-06 တွင် admin မှ
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်နေရာအနှံ့အပြားဆုံးမှာစမ်းသပ်ရေယာဉ်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။ ပုလင်းများနှင့်သံဘူးများ၊ ကွဲပြားသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုမှုများသည်သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ထမ်းများကိုမကြာခဏဆုံးရှုံးစေသည်။ အထူးသဖြင့် glassware ရှိ pipettes များနှင့်စမ်းသပ်ပြွန်များကိုသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းသည်လူများကိုအမြဲသတိရှိစေသည်။ လုပ်အားများစွာကြောင့် ...
Ding, ding, bang, အခြားတစ်ခုကိုချိုးဖျက်လိုက်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဖန်ခွက်များတွင်အကျွမ်းတဝင်ဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန်ခွက်များကိုမည်သို့သန့်ရှင်းရေးလုပ်နည်းနှင့်အခြောက်ခံနည်း။ အသုံးပြုနေစဉ်သင်သတိထားသင့်သောအရာများစွာရှိသည်၊ သင်သိပါသလား။ အသုံးများသော glassware (I) Pipette ကိုအသုံးပြုခြင်း 1. Classification: Single mark pipe ...
စီးပွားရေးနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူလိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် CDC၊ အစားအစာစမ်းသပ်မှုများ၊ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများ၊ သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဂေဟပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး၊ ရေစနစ်၊ ရေနံဓာတုစနစ်များ၊ ဓာတ်အားပေးစနစ်များစသည်ဖြင့်အားလုံးပိုင်ဆိုင်သည်။ ...
Novel coronavirus ကူးစက်ရောဂါသည်ဆက်လက်ပြန့်ပွားလာပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းအဖွဲ့အစည်းများသည်အလိုအလျောက်ဓာတ်ခွဲခန်းအဝတ်လျှော်စက်ကိုစတင်အသုံးပြုလာကြသည်။
20-06-22 တွင် admin မှ
၂၀၂၀ နွေ ဦး တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောကပ်ရောဂါသည်လူသားအားလုံး၏ကျန်းမာရေးကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ကူးစက်သူ ၆ သန်းကျော်ရှိသည်။ လူပေါင်း ၃၀၀၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးကျွမ်းကျင်သူများစွာသည်ကပ်ရောဂါသည်မကြာမီပြီးဆုံးတော့မည်ဟုအကောင်းမြင်ကြသည်။
Hangzhou စည်ပင်သာယာရေးကြီးကြပ်မှုကြီးကြပ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး Liu Feng သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက်၍ coronavirus ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ထုတ်လုပ်မှုပြန်လည်စတင်သည်ကိုစိတ်ပူသည်
20-05-26 တွင် admin မှ
မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် Hangzhou မြူနီစီပယ်စျေးကြီးကြပ်မှုကြီးကြပ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး Liu Feng သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့လာရောက်ပြီးလုပ်ငန်းများပြန်လည်စတင်မည့်အကြောင်းကိုကြည့်ရန်။ ဖြစ်ပွားပြီးကတည်းက ...